Abasebenzisi Be- Injini Yokusesha Ababuza # 1 Ngebhizinisi Lakho | Martech Zone
NgoLwesibili, Januwari 6, 2015 NgoLwesibili, Januwari 6, 2015 Douglas Karr
Ngo-2014, kukho konke ukusesha okuku-Google, Kanjani kwakuyigama elingu- # 1 elisetshenziswa abasebenzisi benjini yokusesha. Yonke imikhiqizo noma insizakalo ethengiswa kwi-Intanethi iphendula a Kanjani. Umbuzo uwukuthi ngabe uyindawo ongaya kuyo yolwazi abalifunayo noma cha.
Uma uyisiphuzo sezemidlalo, kungenzeka kanjani ukuthi ungabhekana kanjani nezinsika, noma ukuthi uwulungiselela kanjani umzimba wakho ukuzilolonga kanzima. Uma uyi analytics inkampani, kungenzeka kanjani ukuthi uyihlaziye ngokunembile idatha ukuze unikeze imbuyiselo kudatha yokutshalwa kwemali yemikhankaso yakho. Uma uyi umklami we-infographic, kungaba kanjani ukukhetha umhlinzeki noma ukuthi ungayithuthukisa kanjani ngempumelelo i-infographic.
Ezinye izinkampani azikhulumi ngazo Kanjani ngoba bakhathazekile ngokubeka izimfihlo zabo zokuhweba online. Yinkemba esika nhlangothi zombili engikholelwa ukuthi uzilimaza ngayo kuphela. Uma ungadaluli ukuthi kanjani, izimbangi zakho zinethuba lokuthi. Ukwazi ukuhlola ngokuphelele Kanjani baxazulula inkinga ibanikeza inzuzo yokuncintisana.
Futhi kulolu suku nakulesi sikhathi, uma ungakholelwa ukuthi abantu abacwaninga ukuthenga kwabo okulandelayo abakwazi ukukuthola Kanjani uyakwenza, uyahlanya. Kungcono ngibhale ukuthi sizilungisa kanjani izinkinga futhi sizisombulule kanjani izingqinamba zamakhasimende ethu kunokuba izimbangi zethu zibeke iminikelo yethu ngokungalungile. Yilokho kanye esikubonile kwenzeka embonini yethu.
Ngakho-ke, njengoba uhlela okuqukethwe kwakho kuka-2015 kwenkampani yakho, kukhona amathani we kanjani imibuzo ungahle uphendule ku-inthanethi.
Kanjani ukukhetha umthengisi (nokuthi kungani ungcono).
Kanjani ukufakazela izindleko (futhi mhlawumbe nokuthi ungabiza kanjani).
Kanjani ukuhlola isixazululo (nokuthi isisombululo sakho sifana kanjani).
Kanjani ukulungisa inkinga (ngaphandle nangesixazululo sakho ukuqonda umehluko owenzayo).
Kanjani imboni iyashintsha (futhi uhlala phezulu).
Kanjani izici zangaphandle (ezomnotho, ithalente, ubuchwepheshe) zithinta isisombululo.
Kanjani ukulungele ukuphendula (izitifiketi, imithethonqubo, ingqalasizinda).
Kanjani izinsiza eziningi ezidingayo (nokuthi ukunciphisa kanjani lokho).
Kanjani kubiza malini (nokuthi ubiza kanjani ngentengo ngempumelelo).
Into enkulu ngokuphendula kanjani imibuzo ukuthi uyakwazi ukubeka kahle inkampani yakho, umkhiqizo wakho noma insiza yakho ukusiza kusixazululo. Impela, uma uphendula Kanjani ukufaka iphansi lokhuni oluqinile, othile anganquma ukuzenzela yena uqobo. Kepha kuyasebenza Kanjani i-athikili ingangena emininingwaneni emikhulu yokunikeza ukuthi kungani kungumbono ongcono ukuthola uchwepheshe.
Ama-DIYs abengeke asebenzise insiza yakho noma kunjalo, ukulandela umuntu ocwaninga ukuthi kunzima kanjani.
Tags: impenduloKanjaniuphendula kanjaniizibonelo kanjanikanjani umbuzoindlelaumbuzo wokusesha
Jan 13, 2015 ngo-10: 07 PM
Ngiyabonga, uDouglas, ngokwabelana ngalolu hlu olushukumisa ingqondo lwamasu wokuqukethwe ongahle abe “kanjani”; kwanginika imibono eminingi emihle!
Jan 13, 2015 ngo-11: 24 PM
Wamukelekile Joanna! Siyabonga ngokuthatha isikhathi sakho ukuphawula!